Tranga hafahafa :: Voatsabo ilay zazakely nisy namantsika ny lohany • AoRaha
Tranga hafahafa Voatsabo ilay zazakely nisy namantsika ny lohany
Voatsabo soa aman-tsara, tao amin’ ny hopitaly tany Tsiroa­nomandidy, ilay zazakely, roa volana sy tapany, izay nisy
namantsika teo amin’ny lohany. Nivoaka ny hopitaly izy rehefa nahazo ny fitsaboana feno.
Tsy misy atahorana intsony ny ainy, hoy ireo mpitsabo. Na izany aza, mbola mila fana­raha-maso akaiky ity zazakely ity. Nilaza ny reniny fa: “tsy voazava ny zava-nanjo ny zanany ary ahiana ho herin’ny maizina”.Tamin’ny 15 jolay lasa teo, tokony ho tamin’ny 2
hariva no nitranga ity loza tany Bemahatazana-Tsiroanomandidy ity. Sendra nisorona afo tany ambany rihana ny reniny, raha tany ambony rihana no natory ilay zaza. Rehefa niverina anefa izy no gaga nahita ny lohan-janany nisy fantsika lava manodidina ny dimy santimetatra. Tsy vitan’izay fa mbola nisy ody gasy niaraka tamin’io fantsika io.
Misy ny fanadihadiana ataon’ny zandarimaria any Bemahatazana hikarohana an’izay mety ho nahavanon-doza kanefa tsy nisy vokany hatramin’ny omaly. Nitantara ny renin’ilay zaza tamin’ireo mpitsabo fa: “efa nisy tranga toy izao ihany koa nahavoa an’io zaza io tamin’ny faharoa herinandro nahahaterahany saingy ny masony indray no voa tamin’izay”.
Vono olona :: Lehilahy hita faty tsy misy tongotr’ila